Maxay yihiin wararka ay Huawei ku soo bandhigi doonto MWC 2019 | Androidsis
MWC 2019 wuxuu si rasmi ah u bilaabmayaa Febraayo 25, wuxuuna socon doonaa ilaa 28-ka Febraayo. Si tartiib tartiib ah, usbuucyadan ayaa qaab yeelanayay, taas oo noocyo badan horay u xaqiijiyeen joogitaankooda Barcelona. Ilaa hadda, noocyada sida LG, Energizer o Nokia ayaa xaqiijisay joogitaankooda munaasabada. Sidoo kale Xiaomi ayaa inooga tegeysa war dhacdadan. Intaa waxaa dheer, Huawei waa mid kale oo xaqiijiyey inay joogi doonaan Barcelona.
Xaaladda badan oo ka mid ah noocyadan sida Huawei maahan inaan sugno 25-ka Febraayo. Sababtoo ah maalin ka hor, Febraayo 24, waxay abaabuleen munaasabado soo bandhigid ah, oo aan ku baran karno wararkooda sanadkaan.
Dhowr usbuuc ka hor Huawei wuxuu xaqiijiyay joogitaankiisa MWC 2019. Nooca Shiinaha ayaa qorsheynaya a dhacdo soo bandhigid Febraayo 24, sida horey loogu shaaciyey boodhadh. Shaki la'aan, mid ka mid ah bandhigyada ugu badan ee la filayo ee dhacdada taleefanka ee Barcelona dhammaadka bishan.
Shakiga in dad badani qabaan waa waxa aan runtii ka filan karno Huawei munaasabadda. Astaantu waxay xaqiijisay joogitaankeeda. Laakiin waa maxay badeecadaha aad soo bandhigi doonto munaasabadda taleefanka ugu weyn adduunka? Tan waxaan horey u haysannay xoogaa xog ah, taas oo naga caawin doonta inaan ogaanno waxa laga filayo nooca Shiinaha.
1 Isku laabashada casriga
2 Aaladaha kale
3 Akhbaarta sharafta MWC 2019?
Isku laabashada casriga
Boorarka ay ku qoran tahay magaca Shiinaha ayaa soo daabacay isagoo ku dhawaaqaya joogitaankiisa shabakadaha, waxaa horeyba loo sheegay taas waxaan filan karnaa taleefan casri ah oo isku laaban. Sawirka waxaad ku arkeysaa qaabka uu u laaban yahay, marka lagu daro inaad awood u leedahay inaad aragto inuu jiro iftiin labada dhinac ee shaashadda ah. Muddo bilo ah ayaa la ogaa in Huawei uu ka shaqeynayo taleefan casri ah oo isku laaban, kaas oo sidoo kale lahaan lahaa taageero 5G, sidaas darteed waxay noqon doontaa tii ugu horreysay ee arrintan ku saabsan. Wax in Horaa loo shaaciyay dhamaadka sanadkii hore.
Dhowr toddobaad ka hor ragii ugu horreeyay ee taleefankan ayaa soo dusay. Iyaga ayaga oo mahadsan waxaan heli karnaa fikrad ku saabsan nidaamka astaamaha Shiinaha ay ku isticmaali doonaan taleefankan. Shaki la'aan, waa mid ka mid ah taleefannada casriga ah ee loogu yeero inay soo saaraan dareen dheeraad ah haddii ay dhacdo, marka lagu daro mid ka mid ah isbeddellada waaweyn ee sannadkan ka socda suuqa Telefoonada Android.
5G wuxuu noqon doonaa mid kamid ah astaamaha ugu muhiimsan ee qalabkan. Huawei waa mid ka mid ah noocyada ugu badan ee ku lug leh horumarinta iyo hirgelinta shabakadaha 5G adduunka oo dhan. In kasta oo sumadda Shiinaha ay soo food saartay dhibaatooyin badan oo ku saabsan geeddi-socodkan illaa iyo hadda. Laakiin qaabkani wuxuu noqonayaa kii ugu horreeyay ee noociisa ah ee iswaafajinaya.
Uma muuqato inay noqon doonto taleefannada casriga ah ee ay Huawei ku soo bandhigi doonto munaasabadda. Warbaahin kala duwan ayaa soo jeedinaysa in nooca Shiinaha uu la imaan doono taleefanno casri ah oo kala duwan munaasabaddan. Way cadahay inay si adag uga go'an tahay MWC 2019, maxaa yeelay sida ay warbaahinta caalamku tilmaantay, ilaa 15 milyan oo yuuro ayaa lagu bixin lahaa istaagideeda weyn iyo xayeysiinta ka hor dhacdada Barcelona. Marka wax badan ayey ka rajeynayaan. Iskusoo wada duuboo, muuqaal hagaagsan, dhibaatooyinka ka jira billahaan awgeed.
Waxba lagama oga inta ka hartay moodeellada ay shirkadda Huawei ku soo bandhigeyso MWC 2019. Warbaahinta qaar waxay tilmaameen inaan wax ka ogaan karno wax ku saabsan P30-ka ku dhex yaal, in kasta oo soo bandhigidda tan dhamaadka sare ah ayaa ka dhici doonta socod, sidii dhacday sanadkii hore. In kastoo ay u muuqato inaan wax badan arki doonno casriga ah oo horeyba u diyaar u ah noocyada qaarkood. Marka sumadu waxay jeceshahay inay nooga tagto wararka ay qorsheeyeen sanadkan.
Waxay u muuqataa in 5G uu noqon doono cunsur caan ka ah qaar badan oo ka mid ah taleefannada casriga ah. Waa inaanan iloobin in Huawei uu soo bandhigay bilawgii sanadka modemkaaga 5G cusub, taas oo hubaal lagu dari doono aaladaha. Laakiin ma hayno magacyo ama xog ku saabsan moodelladan cusub ee lagu soo bandhigi doono munaasabadda. In kasta oo aan ka filan karno tiro taleefannada casriga ah qaybtooda, iyadoo 5G ay tahay muuqaalkooda ugu caansan. Qalabkani waxay u badan tahay inuu noqon doono mid dhexdhexaad ah iyo mid dhexdhexaad ah.
Akhbaarta sharafta MWC 2019?
Tani waa mid ka mid ah waxyaabaha aan la aqoon. Maaddaama ay caadi tahay in haddii Huawei uu goobjoog ka ahaado dhacdo, waxaa sidoo kale jira wax ka cusub Sharafta. In kasta oo laga hadlayo MWC had iyo jeer sidaas ma aha kiiska. Tusaale ahaan, Maamuusku ma uusan aheyn munaasabadii ka dhacday Barcelona sanadkii hore. Ma hayno wax macluumaad ah oo ku saabsan joogitaankiisa dhacdada 2019 illaa hadda.
Intaa waxaa sii dheer, astaanta ma aysan sameynin ogeysiisyo ama raadinta inay abuurto buunbuunin joogitaankeeda MWC 2019 sida noocyada kale. Sidaa darteed, maqnaanshaha xaqiijinta rasmiga ah, ma siinayo dareenka ah inaan war heleyno by Honor munaasabadda. Dhamaan dareenka ayaa ku dhici doona Huawei kiiskan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » Maxaan ka filan karnaa Huawei ee MWC 2019?